Leadfeeder: Aqoonso oo Dhibcaha Shirkadaha B2B ee Soo Booqda Boggaaga | Martech Zone
Talaado, September 22, 2020 Khamiista, Oktoobar 1, 2020 Douglas Karr
Hoggaamiye -bixiye waa barnaamij mareeg ah oo kordhinaya sirtaada iibka adiga oo isku daraya xogtaada iibka iyo suuqgeynta, taasoo u saamaxeysa ururkaaga inuu helo meherado cusub lana socdo macaamiisha jira ee ku soo socda websaydhkaaga. Aqoonsiga waxaa lagu lifaaqay keyd xog-ogaal ah oo shaqaalaha halkaas oo aad ka heli karto emayllada iyo astaamaha bulsheed ee go'aan qaadayaasha ururka dhexdiisa. Tani waa aalad weyn oo loogu talagalay ganacsiyada B2B maxaa yeelay waxay aqoonsan kartaa soo-booqdayaasha aan la garanayn ee damacsan inay wax iibsadaan.
Aqoonsiga Rajada ABM ee Booqashada Boggaaga
Iyadoo qayb ka ah a Suuq-Ku-saleysan Xisaabeed (ABM) istiraatiijiyad, tani waa qalab cajiib ah. Markaad bartilmaameedsato, xayeysiiso, ama aad u dhiirrigeliso wax soo saarkaaga iyo adeegyadaaga shirkado gaar ah, waad u digi kartaa shaqaalahaaga iibka markay shirkadahaasi booqanayaan boggaaga oo ay arkaan meesha ay ka dhexgalayaan bartaada. Leadfeeder wuxuu awood kuu siinayaa inaad liis gareysid liisaska koontooyinkaaga Leadfeeder, u qoondeeysid wakiil, isla markaana lagu wargeliyo isla marka ay booqdaan boggaaga. Kooxdaada iibka ayaa markaa si firfircoon ula socon kara bartilmaameedka.
U Isticmaalka LeadFeeder Habka Iibkaaga
Adeegsiga aalad sidan oo kale ah waxay kordhin kartaa kooxahaada iibka diirada saarida himilooyinka sare ee alaabada iyo adeegyada shirkadaada. Iyadoo la adeegsanayo Leadfeeder iyo qalabkaaga CRM ama ABM, habka caadiga ah wuxuu u ekaan karaa sidan:
Soo booqde aan la aqoon ayaa ku soo galaya websaydhkaaga.
Iyada oo ku saleysan miirayaasha ganacsiga qaarkood ee aad dejisay ama bartilmaameedyada ABM ee aad isku duba ridday, wakiilkaaga iibka ayaa lagu wargelinayaa waxqabadka.
Haddii aadan sameynaynin ABM, kooxdaada iibintu waxay eegi kartaa shirkadda oo ay cadeyn kartaa inay rajo tahay iyo in kale oo aysan ku saleysnayn astaanta shirkadeed.
Haddii ay tahay rajo, wakiilkaaga iibka ayaa markaa ka eegi karaya xiriirada shirkadda Hoggaamiye -bixiye si loo aqoonsado qofka go'aanka gaara shirkada dhexdeeda si uu ula xiriiro.
Waxaad si otomaatig ah uga soo diri kartaa emayl shabakadaada suuq geynta e-maylka ee isku dhafan ama wakiilkaaga iibka ayaa shaqsi ahaan u soo diri kara qoraal ama sameyn kara wicitaan caawimaad ama sameynta wicitaan iib.
Astaamaha Leadfeeder Ku dar
La xiriir Fahanka - Leadfeeder wuxuu kuu fidiyaa helitaanka keyd xog ururin oo adag adiga. Hadda waxaad ku bilaabi kartaa wadahadal dadaal yar.
Gool dhalinta otomaatiga ah - Raadadkaaga ugu kulul ayaa si otomaatig ah loogu dhejiyaa dusha liiska liistadaada si aad u ogaato meesha aad diiradda u saarayso feejignaantaada soo socota.
Generator Lead Leading Degdeg ah - Raadiyahayagu si joogto ah ayuu u riixaa xogta 5-daqiiqo kasta! Kuu siinayaa durdur joogto ah oo ah fursado aad ku daba gasho isla marka ay soo galaanba.
Digniinta Emailka Shaqsiyeed - Markii shirkado gaar ahi soo booqdaan websaydhkaaga waxaa kugu soo wargalin doona emayl taas oo macnaheedu yahay inaad la socon karto waqtiga ku habboon.
Otomaatiga CRM-gaaga - Markaad ku xidho mid ka mid ah isku xidhkayaga CRM, ama Slack, Leadededer-kaaga, dib u fadhiiso sidaan toos ugu dirno booqashooyinka cusub dhuumahaaga iibka.
Isticmaalayaasha Bilaashka ah - Ku dar inta isticmaale ee aad jeceshahay ah isla markaana isticmaal aaladaha maareynta leedhka Leadfeeder si shirkaddaadu weligeed u seegin hoggaamiye kale oo khadka tooska ah ah
Raadin awood leh - Ka raadi shirkad kasta Leadededer oo arag taariikhdooda daalacashada oo dhammaystiran si aad sawir buuxa uga hesho waxa iyaga xiiseynaya.
Sifeynta Jaban - Abuur oo keydso dhammaan noocyada quudinta xoogga leh sida shirkadaha ka socda waddan cayiman, ololaha AdWords ama bog gaar ah.
Leadfeeder wuxuu la midoobaa Pipedrive, Mailchimp, Salesforce, Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, Studio Xogta Google, iyo Google Analytics.
Bilow 14 maalmood oo tijaabo ah oo lacag la'aan ah Leadfeeder
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriye xiriir Hoggaamiye -bixiye ee maqaalkani.
Tags: suuq geynta xisaabaadkaAnalytics googleistuudiyaha xogta googleguskahubsashohoggaamiyemailchimpdhaqdhaqaaqa microsoft 365PipedriveiibindebcinWebCRMzapierZoho